INubico ihlanganisa iziqu eziyishumi ukuthola iMadrid ngezincwadi | Izincwadi Zamanje
UNubico uhlanganisa iziqu eziyishumi ukuze azi iMadrid ngezincwadi
U-Eva Maria Rodriguez | | Amabhuku, Izaziso, eziningana
UNubico, elinye lamapulatifomu ayizethenjwa okufundwa kwidijithali ngaphansi kwemodeli yokubhaliselwe, okuhambisana nomkhosi we I-San Isidro, uqoqe iziqu eziyishumi ukuze azi iMadrid, izindawo zayo ezihlanganisiwe, abantu bayo nezindawo zayo ezihlukene kuwo wonke umlando wayo, ngezincwadi.
«Ingxube yamasiko nendawo yokuhlangana yabantu abaningi abavela kwamanye amazwe abavela kuyo yonke inhlonhlo, iMadrid yisifinyezo sezinto eziningi ezingachazwa ngezincwadi, ezibhalwe ngabomdabu baseMadrileni kanye nabalobi bakwamanye amazwe.«, Basho kusuka kuNubico esitatimendeni.
Lokhu ukufundwa okungu-10 okunconywe nguNubico ukungena emlandweni weMadrid.
#1 - Umlando oyimfihlo weMadrid, nguRicardo Aroca (Umsuka weMadrid)
Ngale noveli sizokwazi ukwazi imvelaphi yeMadrid. Le noveli wuhambo oluthokozisayo ngesikhathi oluchaza ushintsho esikhaleni senhlokodolobha ukusuka lapho iqala khona ngezikhathi zamaSulumane kuze kube manje, kuhlaziywa izimfihlakalo ezisemuva kwezakhi zamanye amabhilidi amele kakhulu. Lolu hambo lwedolobha lusivumela ukuthi siqonde ukuthi ukuguqulwa komphakathi, ezepolitiki kanye nezomnotho kube nakho kanjani ekuboniseni intuthuko emadolobheni.
#2 - UCaptain Alatriste, ngu-Arturo noCarlota Pérez-Reverte
Le noveli izosivumela ukuthi sazi iMadrid yaseHabsburgs ngokungahambi kahle kwesosha elingumakadebona eFlanders thirds. Ukuzidela kwakhe kusicwilisa emigodini yeNkantolo yaseSpain eyonakele, ezindlekweni ezimnyama phakathi kokucwebezela kwezinsimbi ezimbili noma phakathi kwamathaveni lapho uFrancisco de Quevedo enza khona amanethi.
#3 - Umlando wempilo yeBuscónngu-Francisco de Quevedo
Umsebenzi kaQuevedo ungomunye wabavezi abakhulu beGolden Age nokuthi iMadrid neBarrio de las Letras (Huertas) bavela kanjani kula makhulu eminyaka njengenye yezindawo ezazisemqoka ezincwadini zaseSpain: uCervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora futhi kamuva UMoratín, u-Espronceda noma uLarra, bahlala izinsuku zabo lapha.
#4 - Isikhohlakali saseVallecasnguTirso de Molina
Omunye wababhali abakhulu beMadrid beGolden Age ngokungangabazeki nguTirso de Molina. Ubumbano phakathi kwalo mbhali noMadrid lungabonakala kwinani elikhulu lokuqagela emisebenzini yakhe enhlokodolobha, njengoba kunjalo IVillana yaseVallecas, amahlaya abelindele omunye wemisebenzi yakhe emele kakhulu Umkhohlisi waseSeville. Lolu hlobo lohlobo lwaluzobuyiselwa emuva ngemuva yimicimbi engokomlando eyenzeka eSpain: ukungena kukaNapoleon futhi, ngaphezu kwakho konke, ukuvukela kukaMeyi 2 neMpi Yenkululeko.
#5 - Iziqephu Zikazwelonke I. Impi Yenkululeko, UBenito Pérez Galdós
Lona ngumsebenzi ovuthayo wombhali wawo kanye nomfanekiso ohamba phambili waseMadrid wangaleso sikhathi. Ukuzijabulisa kwezempi nakwezepolitiki iSpain ebhekane nakho iminyaka engaphezu kweyisithupha kuhlanganisiwe, okuholele ekuvukeleni kwangoMeyi 2 kokulwa nokuqothulwa kwamaFrance, ngaleso sikhathi iMadrid ibambe iqhaza elikhulu. UDaoiz noVelarde kodwa ikakhulukazi uManuela Malasaña bazokwehla njengezithonjana zedolobha, banikeze igama labo kwenye yezindawo ezithandwa kakhulu edolobheni.
#6 - Izibani zeBohemiannguValle Inclán
Ngalo msebenzi sizongena enkingeni ka-98 naku-Generation ka-98 futhi sizokwazi namathilomu nemibuthano yeSikhungo. Eminyakeni eminingi kamuva kwenzeka umcimbi ophawuleka kakhulu wezwe lethu: ubunzima besikhathi sama-98. Lesi sikhathi saveza isizukulwane esikhulu sesimanjemanje, nababhali okukhona phakathi kwabo uValle Inclán nomsebenzi wakhe. Izibani zeBohemian. Imibuthano yemibhalo yaseMadrid kanye nesibalo esingakhohlwa sikaMax Estrella yisithombe seBohemian Madrid, lapho izixuku zabantu zazihlangana khona ezindaweni zokudlela ukuze zixoxe ngezinto ezihlobene nezepolitiki nezincwadi.
#7 - Amakati Alwangu-Eduardo Mendoza
Eminyakeni ethile kamuva, omunye umcimbi waphawula izincwadi zaseSpain naseMadrid: iMpi Yombango yaseSpain. Kulo mongo kusethwe Ukulwa kwekati. IMadrid 1936,umsebenzi obhekene nomuntu osemncane oyiNgisi, oyingcweti kwezobuciko bakudala, othuthela enhlokodolobha yaseSpain futhi azithole ehileleke esakhiweni esinameva sobunhloli nezombusazwe. Konke lokhu kusethwe eMadrid ezikhathini ezingaphambi kwentwasahlobo ka-1936, ezinsukwini ezandulela ukuqala kweMpi Yombango yaseSpain.
#8 - Imishado emithathu kaManolita, ngu-Almudena Grandes
Kunjalo eMadrid ngaphandle nje kweMpi Yombango lapho kusethwe khona le noveli. Kuyindaba ethinta imizwa ngeminyaka yangemva kwempi yobumpofu kanye ne-tapestry engenakulibaleka yezimpilo neziphetho ezinabalingiswa bangempela nabacatshangelwe ezindaweni ezisemadolobheni ezisemadrid.
#9 - I-Alaska nezinye izindaba zokuhamba, nguRafa Cervera
Lesi simo esinzima sempi siqhathanisa nesimo seqembu esathi eminyakeni eyalandela sakhombisa inhlokodolobha ngaleso sikhathi esasaziwa nge- “La movida madrileña”. Isebenza njenge I-Alaska nezinye izindaba zesigcawu Zibalulekile ukwazi izimfihlo zalesi sikhathi somlando namasiko esenzeka emigwaqweni yaseMadrid efana neMalasaña, iLuchana, iCovarrubias, iTribunal noma indawo yaseSol.
#10 - I-Madrid 1987nguDavid Trueba
Kepha ukukhuluma ngama-80s kukhuluma nangepolitiki noshintsho. Isibonelo salesi sikhathi singabonakala kule noveli, elandisa ngendaba kaMiguel, umakadebona wamaphephabhuku, owesatshwayo nohlonishwayo, kanye no-Angela, umfundi osemncane owenza ubuntatheli onyakeni wokuqala. Njengezitimela ezimbili, ubuntu babo buqondana ngqo, eSpain yango-1987, izwe elalisanda kuqeda ukuvala isahluko se-Francoism futhi elalifakwe kwintando yeningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » UNubico uhlanganisa iziqu eziyishumi ukuze azi iMadrid ngezincwadi
Imihlaba YaseValken. Ulwandle luvutha amalangabi
Ingqondo idinga izincwadi njengenkemba ephuma etsheni lomkhonto